Okpomọkụ Exchangers Market Worth $ 19.5bn Site 2019
Finned tube Air okpomọkụ / Air Preheater
Nku azu Fan Air ngwa nju oyi
Evaporative ngwa nju oyi
Air mma Okpomọkụ Exchanger
Okpomọkụ Pipe okpomọkụ Exchanger
ihe ịga nke ọma bụ ugboro ole
gị Position：Home>News>Industry News>Okpomọkụ Exchangers Market Worth $ 19.5bn Site 2019
Time：24 August 2016 Pịa：72
Dị ka a bipụtara na nso nso akụkọ site TechScience Research, "Global Okpomọkụ Exchanger Market amụma na Opportunities, 2019", nke zuru ụwa ọnụ okpomọkụ Exchanger ahịa ụtụ na-Eburu amuma na-eto eto na a CAGR nke 9 percent n'oge 2014 ka 2019. The zuru ụwa ọnụ ahịa n'ihi okpomọkụ exchangers ahịa a na-atụ aka-ekwesị $ 19,5 ijeri site 2019, ka otu akụkọ.
Amụba ina si abụrụ aku na ebili ulo oru ibu ga-achụpụ ahịa nke okpomọkụ exchangers n'oge ọzọ afọ ise, sịrị a ọhụrụ akụkọ. Otú ọ dị, ntinye nke ọhụrụ mgbere nwere ike ịkpaghasị uto nke ahịa.
The ahịa yiri ka a chụpụrụ site na-eto eto ụlọ ọrụ mmepụta gafee n'ụwa na-amụba ina site na-emepe emepe aku na-esote afọ ise. Ọzọkwa, ina HVAC ngwá na-aba ụba abụrụ aku, n'ụzọ dị ukwuu chụpụrụ site na-eto eto mmepe obodo na mba ndị a ruru nke okpomọkụ Exchanger ahịa a na-atụ anya na-erite uru site na-eto eto ina n'ihi nnọchi ngwa n'oge ọzọ afọ ise.
Otu n'ime isi ihe so na nke a ahịa uto a na-amụba mmepụta eme na mba na emepe emepe. The zuru ụwa ọnụ okpomọkụ Exchanger ahịa nwekwara e ịgba àmà ahụ na-amụba doro nke ume-azọpụta akụrụngwa. Otú ọ dị, ịba ụba mpi n'ihi na ntinye nke ọhụrụ mgbere nwere ike ịkpaghasị uto nke a ahịa.
Okpomọkụ exchangers na-nnoo eji maka rụọ ọrụ nke ọma na-ebufe okpomọkụ site na otu usoro ọzọ. Ndị a na ngwaọrụ na n'ọtụtụ ebe, gbapụ na a ọnụ ọgụgụ nke industries dị ka chemical, HVAC, nri na ihe ọṅụṅụ, wdg Na ndabere nke nhazi, okpomọkụ exchangers na-agụnye nkewa anọ bụ isi bụ ụdị nke na-agụnye shei na tube ụdị, efere na etiti ụdị, ikuku Coolers na obi jụrụ ụlọ nche.
Na Mbụ：ọ dịghị ndekọ
Osote：Nku azu tube okpomọkụ Exchanger Details
Nku azu tube okpomọkụ Exchanger Details
Okpomọkụ Exchangers Market Worth $...
Okpomọkụ Exchanger Global Market amụma
Asia-Pacific-kasị eto ngwa ngwa...
Finned tube Okpomọkụ Exchangers
n'ire na ngwaahịa
>Finned tube Air okpomọkụ / Air Preheater
>Nku azu Fan Air ngwa nju oyi
>Evaporative ngwa nju oyi
>Air mma Okpomọkụ Exchanger
>Okpomọkụ Pipe okpomọkụ Exchanger